NextMapping | Maitiro Akanyanya Kunze Kwevashandi Vari Kure
Takaita ongororo dzakawanda dzevashandi vari kure uye takanyora maitiro akanakisa evashandi vari kure.
Munzira dzakawanda pakanga paine kubvumirana kwese kuti kana 2020 yapera paizove nepfungwa yekudzokera ku'zvakanaka '. Chero zvakajairika zviri zvanhasi zviyero zviri pachena kuti pane hutsva hutsva hwabuda.
Takaongorora vashandi vanopfuura chiuru vari kure ndokubvunza kuti: "Unoda here kudzokera kubasa nguva yakazara apo denda iri riri kudzorwa?"
Vanopfuura 90% yevakabvunzwa vakati havadi kudzokera kunzvimbo yepamberi peCovid.
Mhinduro dzekuongorora hadzina kushamisika kwatiri pa NextMping - isu tanga takatarisana nemagariro maitiro uye pfungwa dzevashandi dzinokanganisa ramangwana rebasa kwemakore gumi apfuura.
Kana isu tichigovana huwandu hwepamusoro nevatungamiriri vanosimbisa kuti ivo vega ongororo dzevashandi vavo dzinoratidza mhinduro yakafanana. Kana vashandi vachida kuramba vachishanda zvakanyanya kure zvinoreva kuti makambani mazhinji anoda kutarisisa masisitimu avo uye zviwanikwa kuti vatsigire nzvimbo yebasa iri kure yeramangwana.
Vamwe vatungamiriri vekambani vari kurwisa chishuwo chekuti vashandi vashande vari kure uye vari kuraira nzira 'yekudzokera kuhofisi'. Maitiro aya haashande zvakanaka mukufamba kwenguva. Iyo genie rakaburitswa muhombodo uye vashandi vakakwanisa kuratidza panguva yaCovid kuti kushanda kubva kumba KUNOGONA kushanda uye kushanda mushe.
Tsvagurudzo yedu inoratidza kuti kudzoka kwekuita mashandiro emakambani mazhinji kunosanganisira mutemo webasa riri kure. Pamusoro pezvo pachave nemhando yakasanganiswa yeiri kure basa uye muhofisi basa.
Remote basa rinoshanda kwazvo kune vazhinji vashandi uye takaona kuti kune maitiro akajairika pakati pevashandi vanobudirira vari kure
Maitiro akanakisa evashandi vari kure anosanganisira:
Ratidza zvakajeka tarisiro pakati pemutungamiri nemushandi pakutenderedza zvinounzwa - ibasa ripi rinofanira kuitwa, nhungamiro dzakatarisana nenguva dzakatarwa kuti zviitwe uye kuti basa riri kuitwa rinoteerwa sei.
Kutaurirana kusingagumi uye kusingagumi kuburikidza neZVESE nzira dzekutaurirana - vanobudirira vari kure vashandi vanoshandisa chat kuburikidza neMMS zvikwata kana yavo online portal, inosvika kunze neIM kune nhengo dzechikwata kugovana chimwe chinhu chinofadza kuboka, kushandiswa kwakanaka kweemail uye kuziva nguva yekutora iyo runhare kana kukumbira kusangana chaiko kumusoro.
Tarisa pamiganhu yebasa kuti urege kuneta - vashandi vanobudirira vari kure vanoona kukosha kwekubva pabasa kugadzirisa uye kugadzirisa
Iko kugona kwekushandisa wega nekurovedza muviri, kuenda kunofamba, kuteerera mimhanzi, kufungisisa uye kukumbira rutsigiro kana rubatsiro.
Paunenge uchishanda pamapurojekiti echikwata uchishandisa nzira yekutarisira chirongwa kuona kuti munhu wese anogara akabatana uye neruzivo rwacho rwunogovaniswa pachena kusanganisira nguva uye zvinopihwa.
Vakabudirira vatungamiriri vari kure vane chinangwa chekutarisa vhiki nevhiki nenhengo dzechikwata chavo kunyatso bvunza kuti 'uri sei?' uye kupa rutsigiro uye kudzidzisa.
Kuronga kwe zvinokoshesa pamberi pevhiki rega rega - kuisa pfungwa pazvinhu zvitatu zvakakosha pazuva - kumisikidza zvinokwanisika zvinodzikiswa.
Kuronga whitespace pakati pemisangano chaiyo - kuseta bhajeti yemaminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu pakati pemisangano inobvumidza kutambanudza, kufamba uye kuzorodza kure nezviwiso.
Kufungidzira zuva rega rega nekuita nekukurumidza kutarisa izvo zvakaitwa, chii chakafamba zvakanaka uye chii chavangaite zvirinani zuva rinotevera (rinotarisana nekuenderera kunatsiridza).
Hatigone kurerutsa 'mushandirapfungwa' uye kuti zvinokanganisa sei ramangwana rebasa. Isu tiri mu 'musika wevashandi' zvinoreva kuti vashandi vakazvipira kutsvaga basa kumwe kunhu kana wavanoshandira asingakwanise kuvapa basa riri kure.
Kana isu tikatarisa pane akanakisa maitiro emushandi ari kure tinogona kuwedzera kushanda kwekuti basa rinoitwa sei kure.